Haddaad maqli jirtay ciyaaryahan,tababare ama kaaliye kaar looga saaray garoonka,maanta wey ka duwan tahay?. | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Haddaad maqli jirtay ciyaaryahan,tababare ama kaaliye kaar looga saaray garoonka,maanta wey ka duwan tahay?.
Haddaad maqli jirtay ciyaaryahan,tababare ama kaaliye kaar looga saaray garoonka,maanta wey ka duwan tahay?.
Kulan ciyaareedkii shalay dhexmaray kooxaha Tottenham iyo Bournemouth ayaa laga soo diiwaangeliyay dhacdo nadir ah kaddib markii mid ka mid ah wiilasha yar yare e kubadaha ku soo celiya Garoomada uu diiday in Kubad baxday uu u dhiibo ciyaaryahan ka tirsan Tottenham.
Wiilka yar oo ka tirsan wiilasha Kubadda u soo qabta Kooxda Bournemouth ayaa soo celiyay kubad baxday,waxaase uu u diiday in uu u dhiibo daafaca Reer Belgium ee Jan Vertonghen oo Tottenham ka tirsan.
Jan ayaa isku dayay in uu wiilkaas kubadda ka xoogo,laakiin wiilkii ayaa kubaddii sii tuuray,waxaana ay sababtay in ciyaarta la hakiyo ilaa uu garsoorihii kulanka kala dhexgalay islamarkaana wiilkii yaraa ka saaray Garoonka.
Sidaas ayuu wiilkii yaraa ku seegan kulankaas oo uu ka ahaa kubad soo qabte,waxaana uu Garsooraha amray in Garoonka laga saaro isaga oo sidaas ku tagay.
Bournemouth ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay kaddib markii ay gool ka dhalisay Tottenham ka hor inta aan 4 loogu beddelin iyada oo Tottenham sidaas ku tiigsatay kaalinta 3aad ee kala sarreynta Horyaalka England.